Ngwa ulo | Ozi bara uru maka onye ọ bụla.
Akụrụngwa: Ngwa ụlọ
Gini bu Lentel LCD TV ???? O guzoro na nkeji iri anọ na ise, ma e jiri ya tụnyere ụdị ndị a na-akwalite, mana ọ dị oke mma igosi…
Gini bu Lentel LCD TV ???? O guzoro na nkeji iri anọ na ise, ma e jiri ya tụnyere ngwa ahịa ndị a na-akwalite, mana ọ dị mma igosi ... M na-arụ ọrụ n'akụkụ a ruo oge ụfọdụ, ahụbeghị m ụdị ika a na mba ndị a. Ekwere m gị…
Kedu ka esi eme ka ọrụ nhicha ahụ dị na igwe igwe ehichapụ?
Kedu otu esi enyere igwe nhicha nhicha n'ọrụ na igwe na-asacha LG? Ọ nweghị ihe dị na ntuziaka maka nke a? Ọ bụrụ na igwe anaghị enwe ọrụ a, agbanyela ya na ya ... "A na-ezube igwe nhicha nhicha ...
A pụghị igbochi TV site na ụmụaka dịka taya tira yiki, na ma ọrụ dị otú ahụ dị na ntinye data #10064; #10064; paswọọdụ SMART # 10064; #10064; #10174; #10064; Ntọala # 10064; #10137; #10064; LOCK # 10064; #10137; #10064; Set. #10064; paswọọdụ Tinye ma ọ bụ gbanwee paswọọdụ nke TV #9998; Paswọọdụ Standard #12300; 0000 # 12301; ... ...
kedu ihe ọ pụtara mgbe ha na-ekwu maka ikuku oyi itoolu, asaa
kedu ihe ọ pụtara mgbe ha na-ekwu okwu banyere ikuku oyi itoolu, asaa Ndị ọkọlọtọ nke ndị a ma ama na-agbaso ikike oke ike. Ọtụtụ ụdị nke nkewa-usoro nwere akara ikike na aha, nke anaghị adaba na kilowatts, ...
Kedu onye na-eme ka gas dị ka ya, ihe ọzọ ị ga-enye ndụmọdụ?
Thenye bụ zanussi geyser, kedụ ka ọ dị, gịnị ọzọ ka ị ga-adụ ọdụ? ihe niile zụtara afọ atọ gara aga abụghị maka ire. ya mere ndi n’ile ahia no n’ile n’ihu nyocha “anyi.” ya mere, were akụrụngwa nke…
Enwere m igwe TV? Ònye nwere Smart TV?
Achọrọ m telivishọn smart? Onye nwere smart TV? Obere ihe dị ka $ 30 onye ọkpụkpọ mgbasa ozi kwesịrị ọnụ $ XNUMX ga-enyere gị aka ịkwadebe TV niile na Smart TV na ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Afọ…
Kedu ka esi ghọta ??? Igwe igwe eji asachapu? Kedu ka ha si dị iche na nkịtị ??
Kedu ka esi ghọta ??? Igwe igwe eji asachapu? Kedu ka ha si dị iche na nkịtị ?? Eleghi anya ikuku na-agba) ())))))) Onye na-asa igwe na-eje ozi n'ikwesị ntụkwasị obi maka ihe karịrị 15let! Oge ịsacha na-ewe ọtụtụ ihe ...
TV LG p42la662v nke ụzọ abụọ stereo ka mma maka 3D?
LG p42la662v TV nke stereo ụzọ na-arụ ọrụ ka mma maka 3D? Ajụjụ: Kedu vidiyo 3D dabara adaba maka LG TV na 3D na-agafe agafe? Azịza: should ga-ahọrọ ụdị stereo 1 nwere mkpebi na-adịghị elu karịa 1920 × 1080. ...
Gwa m ekweisi na ezigbo bass
Gwa m ekweisi na ezigbo bass Audio-Technica ATH-CK303M ezigbo ntị Lee anya na "vstutkom" M nọ ebe ahụ onwe m vrales bluetooth ekweisi. 2.1 were. Ahụghị m ọnụ ala, mana bass nọ ebe ahụ, dị oke egwu. Maka…
Achọrọ m ịzụta oriọna ọkụ, chandeliers n'ụlọ m niile bụ maka ajụjụ 60 BT n'ime
Achọrọ m ịzụta oriọna ọkụ, chandeliers na ụlọ m niile bụ maka ajụjụ 60 BT n'ime oge, mgbe ọ na-edochi oriọna na ọkụ ọkụ, ọkụ ọkụ ahụ na-amụba site na 6. Otú ọ dị, e nwere ...
ebe ibudata brushes maka n'efu
ebe ị ga-ebudata ya na brushes n'efu maka onwe gị. Ntughari bu isi na nchekwa ebe SAI n'onwe ya no (ebe-ebe-gha-SAIEasy Paint Tool SAIelemap). Enwere ụyọkọ faịlụ .BMP. 1. ...
Kedu ụdị TV dị mma ịzụta?
Kedu ụdị TV dị mma ịzụta? Philips adịghị mkpa ihe bụ isi bụ na ihe ngosi TV dị oke mma maka m, dịka ọmụmaatụ, foto TV dijitalụ dị mma, n'adịghị ka mgbaàmà analog nke TV, M nwere 3 ...
Kedu ihe bụ nsogbu maka?
Gịnị bụ fayvtomat maka? Nke a bụ igwe na-akpaghị aka megide sekit dị mkpụmkpụ na RCD n'otu ụlọ - Ọ dị mkpa maka nchebe zuru oke nke eriri ahụ megide oke oke na ujo eletriki .. Difavtomat bụ ndebiri…
Aluminom ma ọ bụ nkedo ihe ọkụkụ ígwè nke kwesịrị ekwesị maka cooker induction?
Aluminom ma ọ bụ nkedo ihe ọkụkụ ígwè nke kwesịrị ekwesị maka cooker induction? Dị ka ọ dị, nkata ígwè ọ bụla a na-eji ígwè eme ihe dị mma maka ndị na-esi nri, ma anyị na-akwado ịzụta ihe ọkụkụ na-esi ígwè ígwè, ọ na-eme ka ọ dị mma ...
Kedu chainsaw dị mma karịa Husqvarna ma ọ bụ jụụ?
Kedu chainsaw dị mma karịa Husqvarna ma ọ bụ jụụ? Nye m, ọ ka mma karịa Husqvarna, mana dịrị njikere ịzụta ihe oriri (mmanụ). Udo dịkwa mma, ma Husqvarna ka e mere maka nnukwu ihe mgbochi osisi. Ajụjụ dị otú ahụ nye m ...
ihe akwụkwọ ozi CL pụtara na ngosipụta nke igwe igwe.
ihe akwụkwọ ozi CL pụtara na ngosipụta nke igwe ịsacha igwe LG. Nke a abụghị ihie ụzọ. CL - mkpọchi ụmụaka (mkpọchi ụmụaka) N’ikpeazụ, bulie ntuziaka ma gụọ. Ngwaọrụ ịsa ahụ na-ezighi ezi ...
Gwa m ebe m ga-esi zụta pan maka multicooker Panasonic SR-TMH18,
Gwa m ebe m ga-esi zụta pan maka multicooker Panasonic SR-TMH18, Ndewo, ị jisiri ike ịchọta nnukwu efere ebe? Ana m achọkwa, enweghị m ike ịchọta ebe ọ bụla ((Otu nsogbu ahụ: otu speck peeled apụ n'ime nnukwu efere ...
Ntak-ekwu na hertz na telivishọn bụ a hoax na ahịa ???
Gini mere ha ji ekwu na HERZ na TV bu ihe egwu na ahia? Enweghị nkwekọ na nkwupụta nke ndị ọkachamara - enwere nnabata ọhụụ nke ọma na onyonyo n'etiti TVs na-akwado 100 hertz na ...
Kedu ihe bụ ọdịiche dị n'etiti obere ntu oyi, enweghị mmiri na ntutu nke usoro refrjiraeto? Nwere ike ịnweta asụsụ nwere ike ịnweta?
Kedu ihe bụ ọdịiche dị n'etiti obere ntu oyi, enweghị mmiri na ntutu nke usoro refrjiraeto? Nwere ike ịnweta asụsụ nwere ike ịnweta? Ọ dịghị ntu oyi bụ nkà na ụzụ nke oge a, ngwá ọrụ nke na-achota na-enweghị kefriza mgbidi nke friji, akpaka defrosting na elu-mma jụrụ ...
LG refrigerators. Mkpebi akwụkwọ ozi.
LG refrigerators. Mkpebi akwụkwọ ozi. LG REFRIGERATORS LG Ka ọ dị ugbu a, otu n'ime ihe ndị kasị ewu ewu bụ 399 usoro refrigerators. Ndị ọhụụ nke usoro isiokwu a, dị ka ihe ọ bụla dị na akara ahụ, adịghị mkpa ka a ga-egbu gị. Ka anya lee labeling ...
Ajuju 14 na nchekwa data emepụtara na sekọnd 0,373.